Qiimaynta - Axdiga Waxbarashada Shirarka
Barashada ardayga iyo horumarka waxaa lagu qiimeeyaa ardayda qaadata qiimeynta STAR 360 ee Akhriska iyo Xisaabta, sedex jeer sanadkii (Deyrta, Jiilaalka iyo Gu'ga). Waxaan u isticmaali karnaa xogta qiimeynta si aan u abuurno dariiqooyin waxbarasho oo shaqsiyeysan xagga akhriska iyo xisaabta si aan u taageerno barashada.
Ardayda fasalka 3aad + waxaa lagu casuumay inay dhammaystiraan Qiimaynta Dheelitirka ee loo yaqaan (Smarter Balanced Assessments (SBAC)) xilligii guga ee Fananka Afka Ingiriisiga iyo Xisaabta, iyo Sayniska ee fasalka 5aad.
Ardayda ku qoran Kindergarten inta lagu guda jiro 6da usbuuc ee ugu horeeya sanad dugsiyeedka waxay u baahan doonaan inay dhammaystiraan Qiimaynta Diyaargarowga Xanaanada. Qiimayntan dhakhsaha leh waxay gobolka siisaa macluumaad ku saabsan aqoonta ay u leedahay ilmo 5 sano jir ah oo caadi ahaan la soo gala.
Ardayda ku qoran Kindergarten iyo ardayda fasalka 1-aad ee cusub-waxay u baahan doonaan inay sidoo kale dhammaystiraan Baadhaha Imtixaanka Akhriska, ilaa saddex jeer sannad dugsiyeed kasta. Waa qiimeyn aad u gaaban oo loogu talagalay in lagu garto wixii dhibaato waxbarasho ee imaan kara da'da hore.